KhunMoung ' s: ဒီဘ၀ကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြတ်သန်းပေမည်
ဒီဘ၀ကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြတ်သန်းပေမည်
ဒီဘ၀ကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ...
ဂျူးရဲ့ စာစုတစ်ခုကို ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “ချစ်သူလား စကားတစ်ပွင့်ပွင့်ခဲ့တယ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာလို့ ထင်ပါတယ်။ ၀တ္ထု အစမှာ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းကဗျာနဲ့ ရေးသူကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကဗျာရေးသူကို မမှတ်မိလို့ I shall not pass this way again ဆိုပြီး ဂူဂယ်လ်တာ မူကွဲတွေ အများကြီးထပ်ထွက်လာပါတယ်။ Author Unknown ဆိုတာတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြင်သစ်သာသနာပြု Stephen Grellet ရေးတာလို့လည်း တွေ့တယ်။ William Penn လို့လည်းတွေ့တယ်။ William Ashmead Courtenay ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လို့လည်း တွေ့တယ်။ ပြင်သစ်ကဗျာတစ်ခုကနေ ပြန်ဆိုထားတာဆိုရင်တော့ Stephen Grellet ရေးတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Stephen Grellet အကြောင်းက ၀ီကီမှာ ထွေထွေထူးထူး မရှိပါဘူး။ သူရဲ့စာပေဘ၀ကိုလည်း မတွေ့ရဘူး။ သူ့ရဲ့သာသနာပြုဘ၀ကို တခြားသူတွေက ရေးထားတဲ့စာအုပ်စာရင်းတွေကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ Stephen Grellet ရေးတယ်ဆိုတာနဲ့ တခြားမူကွဲများကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ကဗျာလေးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တွေ ဆောင်းပါးတွေ အများစုကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
_Stephen Grellet (born Etienne de Grellet du Mabillier) (1773-1855)_
_Stephen Grellet, 1773-1855 (French-born Quaker Minister)_
"I expect to pass through this life but once. Therefore, if there be any kindness I can show, or any good thing I can do for another human being, let me do it now, for I shall not pass this way again."
"I expect to pass through this world but once: if therefore, there be any kindness I can show, or any good thing I can do, let me do it now; let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again."
_Quote of William Ashmead Courtenay_
"Through this toilsome world alas!
Forasuffering fellow man,
I shall not pass this way again!"
madyjune November 17, 2007 at 12:09 PM
I will check back at home to see which poem she mentioned in the book.
KhunMoung November 18, 2007 at 1:39 AM
4 18+ Gentlemen's Eyes Only
Disabling Error Report
The Noble Eightfold Path of Buddha
သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ အမှတ်တရ
Pidgin,Multi-Protocol Instant Messaging Client
I Never WearaHelmet , They Don't Look Cool